Ahoana ny fampiasana ny lalàna tsy misy fifandraisana aorian'ny fisarahana amin'ny ex - Fifandraisana
Ahoana ny fampiasana ny lalàna tsy misy fifandraisana aorian'ny fisarahana amin'ny ex
Betsaka amintsika no misafidy handeha turkey mangatsiaka aorian'ny fisarahana. Midika izany fa tsy mahita na mifandray intsony amin'ilay taloha.
Ny olona sasany, na izany aza, misafidy ny hamaritra halavam-potoana kendrena izay tsy hiresahany amin'ny olon-tiany taloha, ary avy eo tombano ny safidiny raha tapitra io fotoana io. Mety ho 30 andro na 3 volana na vanim-potoana hafa io.
Handinika ny fomba hampiasanao an'ity fitsipika ity amin'ny fomba mety aminao indrindra izahay - ary ny fomba hifikirana aminy!
Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia misy vintana lehibe mety handehananao fisarahana amin'izao fotoana izao ary halaim-panahy handefa hafatra amin'ny vadinao taloha ianao.
Ataovy ao an-tsainao mandritra ny minitra vitsy izany eritreritra izany, vakio ny soso-kevitray, ary jereo ny zavatra tsapanao amin'ny farany.
Aza adino - vetivety ihany izany ary afaka mamakivaky azy ianao. Tonga eto izahay hanampy anao…
Raha ataonao mba hamerenanao ny taloha.
Ny iray amin'ireo antony lehibe nanakanan'ny olona ny fiainany taloha nandritra ny volana vitsivitsy dia ny famerenana azy ireo hiverina.
Ankehitriny, mety hihemotra izany - nahoana ianao no manome azy ireo fitsaboana mangina raha te hiaraka amin'izy ireo ianao?
Misy antony maromaro hanaovana an'io.
Voalohany, manome anao toerana roa hampangatsiatsiaka sy ahazoana mazava ny fifandraisana. Ny fotoana sy ny elanelana misaraka dia mety hahatonga anao samy hahatsapa izay zavatra tsy ampy anao sy ny halehiben'ny nanananao azy teo aloha.
Azonao atao ny mamita izay rehetra nanosika ny iray taminao hamarana ny raharaha, ary manana ny fotoana hananganana ny fiainanao ianao ary hifantoka amin'ny tenanao, amin'izay dia vonona ny hanolo-tena tanteraka ianao rehefa tafaraka.
Rehefa mahita anao indray izy ireo dia hiala amin'ny fahasosorana madinidinika na fifandaharana nisy teo aminao, ary hahita anao ho mpiara-miasa mandroso sy mahaleo tena ary manintona indray!
Izany no maha-zava-dehibe ny dingana etsy ambany - tsy afaka miresaka amin'ny vadinao taloha ianao mandritra ny 3 volana (na fotoana hafa), mila mifantoka amin'ny fanatsarana ny tenanao sy ny fitomboana ianao…
Ny mandeha tsy mifandray dia tsara ihany koa satria manome fotoana anao hifantohana amin'ny tenanao sy hatanjaka ary hatoky tena bebe kokoa. Midika izany fa rehefa mahita ny sakaizanao miresaka momba ny fiverenana miaraka ianao dia hahatsapa ho tsara!
Raha te hiverina any amin'ny vadinao taloha ianao, dia mety ho sosotra be ianao ary mety hanao zavatra hanenenanao any aoriana. Rehefa dinihina tokoa, ara-dalàna raha somary clingy na mamoy fo rehefa namarana ny zavatra ny vadinao, fa angamba tsy handresy lahatra azy ireo hamerina anao!
Amin'ny fanomezana anao sy azy ireo toerana, dia ho hitan'ny olon-tianao taloha fa afaka mahaleo tena ianao ary manao ny anao manokana, ary koa te-hiaraka amin'izy ireo. Mampiseho azy ireo fa mahavita matotra ianao, ary azo inoana fa te hiverina hiaraka aminao izy ireo.
Tsy misy zavatra manintona kokoa noho ny olona iray miaraka amin'ny fiainany, izay manana ny fialam-boliny sy ny namany manokana, ary mahita ny fiarahana ho zavatra iray izy ireo te , toa izay NILA .
Torohevitra 7 hanampy anao hifikitra amin'ny lalàna tsy misy fifandraisana.
1. Gazety NAHOANA manao an'ity ianao.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hifikirana amin'ny lalàna tsy misy fifandraisana dia ny manoratra ny antony anaovanao azy voalohany.
Aza adino ny milaza aminao amin'ny fomba maharary rehefa manao izany ianao - arakaraka ny ahalalanao azy no ahafahanao mamoaka azy. Tsy misy olon-kafa mila mahita na mahafantatra izay soratanao, koa esory daholo.
Azonao atao ny mieritreritra ny antony nisarahanao voalohany, na ny fanapahan-kevitr'izy ireo na ny anao.
Manaova fanamarihana momba ireo zavatra nahatonga ny fisarahana - raha toa ka namitaka, ohatra, ny iray aminareo. Avy eo mandehana amin'ny antsipiriany momba ny antony midika izany fa tsara kokoa ny mifanalavitra - tsy azonao atokisana izy ireo, na misafidy ratsy ianao satria tsy dia milamina miaraka amin'izy ireo.
Amin'ny fampidirana ny antsipiriany momba NAHOANA mitombina ireo antony ireo, azo inoana fa tadidinao tsara kokoa ny fahatsapana zavatra ratsy rehefa niaraka tamin'ny olon-tianao taloha ianao. Ireo fahatsapana ireo no hanakana anao tsy hiverina aminy.
Ampiasao ity fidirana journal na lisitra ity ho toy ny zavatra miverina isaky ny alaim-panahy handefa hafatra amin'izy ireo ianao na hanao hazakazaka 'tsy nahy'. Hanampy anao hifantoka amin'ny tena antony ampiharanao io lalàna tsy mifandray io izany.
Tsy tsapako fa tian'ny sipako aho
2. Alao sary an-tsaina ny hoavinao.
Mety ho mafy be izany rehefa eo anelanelan'ny fisarahana ianao, ary mety hahatsapa fa tsy ho mihoatra ny taloha na ny fifandraisana ianao. Saika jamba ianao noho ny fanaintainan'ny ratram-po toa tsy misy safidy hafa.
Misy! Manaova tabilao mampihetsi-po na miresaka amin'ny namanao momba ny hoavinao. Aza manonona ireo olon-tiana tantaram-pitiavana amin'izao fotoana izao, fa mifantoha amin'ireo lafiny hafa amin'ny fiainanao sy ny mety ho endrik'izy ireo.
Izany dia manome anao efitrano fofonaina avy amin'ny fieritreretana ny fitiavana sy ny fifandraisana, ary manampy anao hifantoka amin'ny zavatra hafa efa nataonao tamin'ny fiainanao!
Rehefa mandalo fisarahana isika dia toy ny hoe tsy voafaritra amin'izany ihany isika. Manadino ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainantsika isika - toy ny fianakaviana, fialamboly, asa, namana.
Ampiasao ity fotoana ity mba haka sary an-tsaina izay mety hitranga, na izay tianao hitranga, ao anatin'ny taona vitsivitsy. Miezaha mafy ary avelao ny tenanao ho voatarika hiala!
Eritrereto ny asanao nofinofinao, izay hipetrahanao, izany zavatra izany. Raha olona be fahitana toa ahy ianao dia afaka mahazo antsipiriany toy ny karazana ondana ao an-tsena ao amin'ny trano fonenanao New York penthouse.
Na inona na inona mampientanentana anao indray ary manome anao zavatra kendrenao - na matotra na asa io…
3. Mametraha tanjona azo tanterahina.
Mety hahatsapa ho mampatahotra ny manapaka fifandraisana fotsiny amin'ny olona iray manontolo, ary misy antony indraindray tokony hiresahanao amin'ny olon-tianao taloha.
Omeo tanjona kendrena tadiavinao ny tenanao - angamba hitanao indray mandeha izy ireo hamerina azy ireo ny fananany, ary avy eo mody tsy misy izy ireo mandritra ny 30, 60, na andro firy.
Tsy dia misy fotoana voafaritra, indrisy, fa amin'ny fanomezana fotoana lava lavitra azy ireo dia ho fantatrao tsara ny fahatsapanao ny taloha.
Mety maharitra herinandro na volana vitsivitsy ny ratram-po vao tena afaka mifantoka amin'ny firosoana ianao, noho izany dia miasà amin'ny fotoana heverinao fa mila.
Raha mirona herinandro na roa aorian'ny fisarahana ianao mba hilomano manodidina hitomany sy hihinana gilasy dia omeo ny zavatra ilainao ny tenanao ary avelao hitranga izany.
Raha manome roa volana fotsiny ny tenanao alohan'ny ahatongavanao amin'ny olon-tianao aorian'ny fisarahana, dia mety mbola ao anatin'ny dingana henjana sy mahakivy ianao ary hihetsika mifototra amin'ireo fahatsapana ireo.
Omeo fotoana ny tenanao hahafantatra izay tena tadiavinao amin'ny fandaniana fotoana bebe kokoa - mety hahatsapa ho tsara kokoa ianao mandritra ny volana vitsivitsy, na mety ho tsapanao fa io no tena izy ary te hanandrana indray ianao.
Handinika amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba izany izahay amin'ny faran'ny ity lahatsoratra ity…
4. Avelao ny alahelonao hampalahelo ny fiarahana.
Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, ny sasany amintsika dia tena mila fotoana fotsiny ho torotoro fo. Somary fombafomba tokony lalovantsika io.
Raha fantatrao fa ny fisarahana rehetra dia mamela korontana mitomany mandritra ny herinandro vitsivitsy dia omeo izany fotoana izany. Avela tanteraka ianao hahatsapa alahelo sy mahatsiravina ary toy ny hoe tsy hisy zavatra tsy haninona intsony. Mila mamela ny tenanao halahelo ny fifandraisana ianao raha tena miala amin'izany.
Tadidio fa mitombina tanteraka izany. Very olona iray sy fifandraisana iray taminao tokoa - ary koa kinovan'ny tenanao, ary fahatsiarovana sy fanantenana ho an'ny ho avy miaraka.
Betsaka ny zavatra tsy maintsy lalovana, ary mila manodina azy rehetra ianao raha afaka mifikitra amin'ny lalànan'ny tsy fifandraisanao.
Raha manandrana mandingana ity dingana ity ianao dia azo inoana fa hiverina indray ary tampoka dia ho voa mafy tokoa ianao amin'ny alahelo ny halahelonao taloha. Midika izany fa mitovy ianao amin'izay Bebe kokoa mety te-handefa hafatra na hahita azy ireo.
Mba hisorohana an'io tranga io dia makà fotoana hitadiavana alahelo sy alahelo - ary avy eo mandrosoa!
5. Esory ny fakam-panahy.
Betsaka amintsika no manapa-kevitra fa tsy hiresaka amin'ny taloha intsony… ary avy eo jereo hatrany ny mombamomba ny Instagram, na hamaky indray ny tantaran'ny hafatray.
firy taona i matt leblanc
Mampijaly ny tenantsika isika amin'ny alàlan'ny fanamarinana sao misy olon-kafa tia ny sariny, na raha toa ny daty misy azy ireo (efa ?!) ny tantaran'izy ireo.
Na mamaky ny resaka nifanaovanay taloha izahay ary mitady ny famantarana fa efa hamarana ny raharaha izy ireo, ary manontany tena izahay raha mbola hiaraka izahay raha tsy nandefa izany hafatra izany herinandro vitsivitsy lasa izay.
Tsy mahasoa mihitsy izany raha manandrana mamily olona ianao - ary izany angamba no antony andramanao ny lalàna mifehy ny fifandraisana.
Raha tena te-hiverina amin'ny vadinao taloha ianao dia midina mankany amin'ny faritra misy anay amin'izany!
Azonao atao ny manandrana mandresy lahatra ny tenanao fa ny manamarina hafatra sy mombamomba anao dia tsy isaina ho ‘fifandraisana,’ saingy fantatrao fa tsy mahasalama na mahavokatra.
Fero ity amin'ny fanesorana ny fakam-panahy. Manampia sary ao amin'ny horonan-tsarinao fakantsary amin'ilay rakitsary ‘nafeninao’ mba tsy dia hijery azy ireo ianao.
Alefaso amin'izy ireo ny chat WhatsApp anao - azonao atao ny mandefa mailaka azy amin'ny tenanao mba hahazoanao (izany dia mahatonga azy tsy hahatsapa ho malahelo kokoa!), Ary hamafana ny resaka amin'ny telefaoninao.
Ampidino amin'ny media sosialy izy ireo, na fanginana, farafaharatsiny mba tsy ho sendra sendra ny sarin'izy ireo ianao rehefa mikorisa.
Raha manamarina ianao na tsia efa nataon'izy ireo jereo ny tantaranao, afeno aminy. Tsy ho fantatr'izy ireo mihitsy, ary manakana anao tsy hanaiky loatra izany ary hanontany tena ny dikan'ny hoe nijery azy io (na tsy nijery azy), sns.
Izany rehetra izany dia hanampy anao hifikitra amin'ny lalànan'ny tsy fifandraisanao satria tsy 'ho voatafika' noho ny fisian'izy ireo virtoaly.
Arakaraka ny maha kely kokoa ny fiatraikany amin'izy ireo no tsy dia hamakianao boky - ary arakaraka ny maha kely ny fanirianao handefa hafatra amin'izy ireo na hanolo-tanana.
6. Mifantoha amin'ny tenanao ary miasà ho be atao.
Ny iray amin'ireo zavatra tena ilaina tadidy dia izany ianareo no manao an'io. ianareo nisafidy ny handray fotoana feno amin'ny fialanao taloha - satria fantatrao fa izany no zavatra tsara tokony hatao.
Tena tsara izany, satria mampiseho fa misafidy ny hifantoka amin'ny fahasalamanao ianao. Manao ny tenanao ho laharam-pahamehana ianao.
Raha te hifikitra amin'ny lalàna mifandraika amin'ny fifandraisana dia mila manohy mino ianao ary mampiseho fa ianao no lohalaharana eto. Midika izany fa mifantoka amin'ny tenanao sy mijery ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana.
Ny fampihetseham-batana na fotoam-pisaintsainana dia mety tsy ny zavatra eritreretinao voalohany rehefa misaraka ianao, fa miezaha mitady fotoana hampifanarahana azy ireo rehefa afaka.
Amin'ny fomba rehetra, mandehana amin'ny dingana sakafo-junk amin'ny fisarahana, fa andramo antoka fa mihinana sakafo ara-pahasalamana farafaharatsiny ianao, misotro rano ampy, ary mahazo rivotra madio sy tara-pahazavana ampy!
Amin'ny fitandremana ny sainao sy ny vatanao toy izao dia manolo-tena hifantoka amin'ny tenanao ianao. Arakaraka ny ifantohanao amin'ny tenanao no tsy dia halaim-panahy hifantoka amin'ny taloha.
Ny fijanonana ho be atao dia hanampy anao hamakivaky ny dingana tsy misy fifandraisana amin'ny vadinao taloha aorian'ny fisarahana. Raha manana fifangaroana drafitra tsara ianao - mahita namana, yoga, alina amin'ny filma, fanazaran-tena amin'ny faran'ny herinandro sns - ho variana amin'ny eritreritrao ianao ary tsy ho afaka hipetraka sy hikoropaka fotsiny.
Ampiasao ny lalàna tsy misy fifandraisana mba haka fotoana kely ho anao ary hamenoana ny fiainanao amin'ny zavatra tianao atao.
7. Manaova namana namana hafa milahatra.
Mety manontany tena ianao… iza no hiresahako izao?
Rehefa mandalo fisarahana izahay dia mora tokoa ny mahatsapa ho irery sy manirery avy hatrany. Efa zatra mandefa SMS amin'ny namanao ianao, miantso azy ireo, manara-maso miaraka aminy rehefa kivy ianao satria fantatrao fa hampifaly anao izy ireo.
Aorian'ny fisarahana, mety tsy ho hitanao ireo fifandraisana kely ireo.
Raha tokony halaim-panahy handefa hafatra amin'ny olon-tianao taloha ianao, isaky ny mahatsiaro ho malahelo ianao na te hizara zavatra amin'ny olon-kafa, dia manaova namana voatendry vonona hisolo toerana!
Mandefasa hafatra maraina ho azy ireo fa tsy mandefa selfie mahafatifaty na horonan-tsary mahatsikaiky, lazao azy ireo fa tia azy ireo alohan'ny hatory amin'ny alina.
Mety ho toa hadalana izany - tsy mitovy amin'ny fandefasana hafatra amin'ny namanao izany, fantatray - fa hanampy anao izany.
Ity dia fomba tsara hanatanterahana ny lalàna tsy misy fifandraisana satria mbola mahatsapa fa tiana ianao ary mbola mahazo mankafy fifampiresahana amin'ny olona iray izay miahy anao.
Angataho ny olon-tianao hanampy anao. Indraindray, mila miantso fotsiny amin'ny basy lehibe ianao! Ny havanao akaiky sy ny namanao dia hahafantatra anao tsara ary hahafantatra ny fomba hanampiany anao mandritra izao fisarahana izao. Resaho amin'izy ireo ny zavatra ataonao sy ny antony - ho mpanohana izy ireo ary te hanampy anao hifikitra amin'ny lalàna tsy misy fifandraisana.
Raha misy andro sarotra ho avy dia ampahafantaro ny namanao mba hanohanany anao bebe kokoa. Fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fialantsasatra - izay rehetra heverinao fa mety hahatonga anao hahatsapa ho alaim-panahy handefa hafatra amin'ny olon-tianao taloha.
fomba fanomezana toerana ho an'ny lehilahy
Ny fampiasana ny lalàna tsy misy ifandraisany amin'ny maha 'tapaka' ny fifandraisana.
Okay - ka io no fanontaniana lehibe. Manala sasatra amin'ny fandefasana hafatra na ny fahitana ny sakaizanao taloha ve ianao, nefa te hiaraka indray?
Raha tadiavinao izy ireo hiverina, dia mety nanapa-kevitra ny hiala sasatra mandritra ny volana vitsivitsy ianao. Amin'izay dia tena maniry ny hitadidy ny fotoana laninao ianao.
Zava-dehibe ny fanarahana ireo tolo-kevitra etsy ambony mba hahafahanao mifikitra amin'ny fitsipika mandritra ny fotoana nametrahanao ny tenanao.
Na izany aza, te-handany fotoana kely hieritreretana momba izay tena tadiavinao ihany koa ianao.
Diniho ny antony nisarahanao voalohany - iza no nanapa-kevitra, ary inona no nitranga nanosika azy io?
Tena tianao ve izy ireo, sa ny hevitr'izy ireo fotsiny?
Amin'ny fiatoana kely amin'ny firesahana amin'ny olon-tianao taloha dia hanana fotoana kely ianao hifantohana amin'ireo fanontaniana ireo, ary handalina lalina ny valiny.
Ny fialan-tsasatra toy izao dia mety ho tsara, saingy mila mametraka fitsipika ifotony ianao.
Miala sasatra ihany koa ve izy ireo sa handefa hafatra ho anao? Mahazo mampiaraka olon-kafa ve ianao mandritra io dingana tsy ifandraisana io? Rahoviana vao hiresaka indray, ary samy hanao ny marina tanteraka amin'ny zavatra tadiavinao?
Ny fanomezana fotoana sy fotoana anao hahalalana izay tena tadiavinao dia tena hanampy anao tokoa. Mety ho tsapanao fa, rehefa afaka kelikely, dia milamina irery ianao. Mety ho maivamaivana aza ianao rehefa nisaraka!
Ity no karazana fahitana azonao raha tsy mifikitra amin'ny lalàna tsy misy fifandraisana ianao - raha miresaka amin'izy ireo ianao na mahita azy ireo, dia mety handao ny tena fahatsapanao ianao ary hiaraka amin'izy ireo satria fotsiny ianao tsy tafiditra amin'ny fiarahana, tsy voatery izany fifandraisana.
Ahoana raha manantona anao izy ireo - ary tianao hiverina izy ireo?
Ka inona no hitranga raha mandika ny lalàna mifehy ny fifandraisana izy ireo? Raha te hiaraka indray ianao, dia mety mbola ho lava ny elanelam-potoana lavitra.
Aza adino fa nanohitra ny fanirianao ara-teknika izy ireo tamin'ny fanatonana tanana - hitanao ve izany fa tsy fanajana, mampiseho izany tsy fisian'ny fankasitrahana ny fetra izany, mila miasa amin'ny fifandraisana ve izy ireo?
Na angamba mampiseho izany fa tsy afaka miaina tsy misy anao ry zareo, fa mifankatia amin'ny fanaovana fihetsika izy ireo, ary saika hanao zavatra mitovy ihany…
Ianao irery no afaka mahalala ny fahatsapanao an'ity iray ity, koa matokia ny tsinainao ary ataovy mahitsy amin'ny tenanao!
Tadidio fa mety tsy hitovy amin'ny anao ny fikasan'izy ireo. Miezaha mamantatra izay tadiavin'izy ireo aminao.
Nifandefa hafatra tamin'ny 3 maraina ve izy ireo ny zoma alina? Misy ny vintana tsy tena tadiavin'izy ireo hiaraka aminao, ka tsarovy fa mety ho mamo fotsiny izy ireo, manirery, mandalo zavatra, na rehefa avy mihantona fotsiny.
Ahoana no hiverenana miaraka amin'ny taloha rehefa tsy misy fifandraisana.
Diniho raha nahatsapa ianao na nanana fotoana ampy hiasa amin'ny tena. Raha mila fotoana bebe kokoa ianao hahatongavana amin'ny sehatra iray izay atokisanao sy ampy hery hanandramanao hanana fifandraisana salama kokoa, tsy maninona.
Raha manaja anao ny anao taloha ary maniry zavatra hiasa ampy dia tsy hampaninona azy ireo ny miandry herinandro vitsivitsy na iray volana hafa!
Hamarino tsara fa mandray io fanapahan-kevitra io ianao satria tena tadiavinao izy ireo hiverina, fa tsy hoe satria mahafinaritra ny manana firaiketam-po sy fifantohana indray.
Ny fanokafana fotoana misimisy kokoa dia tena afaka manampy anao hifantoka ny fomba hampandeha ny fifandraisana , ary manome fotoana roa anao hampiarahana izany ary tena hanolo-tena.
Mety samy nanana fotoana mety ianareo roa mba hitombo bebe kokoa amin'ny maha-isam-batan'olona, ​​ary hahatsapa fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fifandraisana izao.
Eritrereto ny fanirianareo roa hiasa ny fifandraisana, sy ny fanovana nataonareo roa.
Samy eo amin'ny toerana mety ve ianareo mba hiara-hivory izao?
Efa nanasitrana naratra ve ianao, ary azonao avela handeha ve izany ary hanomboka indray, sa samy hanomboka amin'ny toerana nisy lolom-po sy lolom-po taloha ianareo?
Vonona ny hanao ny marimaritra iraisana ve ianareo roa, ary azo antoka ve fa azo vahana ny fifandraisana sa nisy fotoana nisarahana nampahafantarinao fa mety ho tsara kokoa ny miantso azy io isan'andro fotsiny dia mandroso?
Rehefa mandefa hafatra aminao izy ireo dia asehoy fa nanokana ity fotoana ity ianao mba hitomboana sy hiasa amin'ny tenanao! Aza tonga ilay sahirana, diso fanantenana fa mety manantena izy ireo.
Fa kosa, milalao malala sy mahafinaritra, ataovy maivana mandra-pahatonganao samy mahita ny zava-mitranga. Ataovy mazava tsara fa ho tafavoaka velona ianao raha tsy misy azy ireo - manintona tokoa ity!
Mety ho hafahafa ihany izany, saingy ny fahafantarana fa misy olona mandroso irery dia mety hahatonga antsika haniry hiaraka amin'izy ireo bebe kokoa. Asehoy ny taloha fa ho izy ireo koa amin'ny fiainanao fa tsy ny fiainanao manontolo!
Tokony handefa hafatra amin'izy ireo ve aloha ianao sa hiandry azy ireo?
Raha mametraka fe-potoana mazava tsara ianao amin'ny fotoana tsy tianao handrenesana azy ireo, ary mandalo ity daty ity nefa tsy mifandray amin'izy ireo, dia mety ho fambara fa tsy mahita ho avy eo anelanelanao izy ireo.
Etsy ankilany, raha nametraka ny lalàna mifehy ny fotoana tsy hifandraisana ianao dia mety miandry anao ny hanao ny hetsika voalohany fotsiny izy ireo.
Raha te hanandrana hanao azy ireo hiasa ianao ary tsy nanao ezaka akory izy ireo hifandray aminao rehefa tapitra ny fe-potoana nifanarahana, ny fandefasana hafatra amin'izy ireo ihany no safidinao.
Anjarany avy eo na mamaly na izay lazainy.
Fa inona no tokony ho very eo aminao?
Miasa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny taloha ny lalàna tsy misy fifandraisana?
Ny valiny fohy sy tsy dia manampy dia… miankina amin'izany.
Tonga any amin'izy ireo sy ny zavatra tsapany mandritra io fotoana io. Mety ho ny zava-misy no ahatakaran'izy ireo izay very. Mety hanome azy ireo ny antony manosika azy ireo hametraka ilay asa handresy anao indray ary hahatonga ny fiarahana hiasa fanindroany.
Ny tsy fahitana na firesahana aminao mihitsy mandritra ny fotoana maharitra dia mety hampisy izany fahatsapana izany noho ianao mbola eo amin'ny fiainany, na dia amin'ny alàlan'ny lahatsoratra fotsiny aza.
Etsy ankilany, toy ny mety ho tsapanao fa tsara lavitra ianao, dia mety hanatsoaka hevitra mitovy ihany izy ireo ary hiala amin'ny fiarahana.
Ny zava-dehibe dia ny lalàna mifehy ny fifandraisana tsy manam-pifandraisana manamora ny fahazavan-tsaina io, koa na izany na tsy izany, ny fanapahan-kevitra hiara-hiverina na hijanona ho samy hafa dia azo inoana fa ho dinihina tsara kokoa ary mety hiasa ho anao roa.
Mandra-pahoviana no tsy tokony haharetan'ny fifandraisana?
Tsy dia misy fotoana voafaritra, fa ny ambany farafaharatsiny 30 andro angamba. Misy latsak'izany ary tsy omenao ny tenanao na ny taloha hanodinana ny fahatsapanao ary hahitsy ny lohanao.
Mety hametraka andro voafaritra toy ny 30, 45, na 60. Na 2 na 3 volana ianao raha mora ny manisa.
Na azonao atao ny misafidy ny faran'ny iray volana ho teboka tapaka. Ka raha misaraka amin'ny tapaky ny volana martsa ianao dia mety hilaza fa tsy tokony haharitra hatramin'ny faran'ny volana aprily ny fifandraisana. Mora kokoa ny mitadidy an'io satria ny fe-potoana 60 andro dia mety hifarana amin'ny Alarobia tsy misasakalina ao anatin'ny iray volana, ary raha tsy manana an'io daty io ao amin'ny diarinao ianao dia mety hadinonao rehefa tonga izany.
Azoko vonoina ve ny fifandraisako raha tena malahelo azy ireo tokoa aho?
Eny, tsia, tsy tokony hifandray amin'izy ireo ianao na dia ianao aza malahelo azy ireo mafy aho . Ny teboka iray manontolo tsy hifandraisana dia ny manome fotoana anao hanasitranana amin'ny fisarahana ara-pientanam-po. Tsy hamela ny tenanao hanao an'io ianao raha tsy manome fotoana ampy ho an'ny tenanao.
Inona no tokony andefasanao hafatra amin'ny olon-tianao taloha rehefa tapitra ny fotoana tsy ifandraisana?
Raha heverina fa tadiavin'izy ireo hiverina izy ireo dia ataovy tsotra fotsiny. Aza mandefa hafatra lava be milaza fa tsy afaka miaina tsy misy azy ireo ianao ary maniry azy ireo hiverina avy hatrany.
Tsy fantatrao ny fihetsehampon'izy ireo ary mety hanery azy ireo hiatrika tsindry mafy izany.
Ataovy fohy fotsiny ilay izy. Anontanio izy ireo raha te hihaona hiresaka. Mora be kokoa ho azy ireo ny miteny azy ireo raha izany no tian'izy ireo atao.
Tsara kokoa ihany koa ny firesahana be momba ny hoavinao miaraka miaraka satria mety ho diso adika ny lahatsoratra sy ny antso.
Nandika ny lalàna mifehy ny tsy fifandraisanay aho, tsia?
Raha tsy afaka nanohitra fakam-panahy ianao ary nandefa hafatra tamin'ny adiresy taloha na nanamboatra fihaonana ‘tsy nahy’ niaraka tamin'izy ireo nandritra ny vanim-potoana tsy nisy fifandraisana aza dia mety tsy nanome fotoana ampy anao hiasa amin'ny fihetsem-ponao ianao.
Aza mifandray amin'izy ireo intsony, ary aza adino ny manampy amin'ny andro fanampiny amin'ny vola nolazainao tamin'ny voalohany fa avelanao.
Ahoana raha manantona anao izy ireo - ary tsy tianao hiverina izy ireo?
Raha manantona anao ny olon-tianao mandritra ny dingana tsy misy fifandraisana dia mety ho tsapanao fa tsy tena liana te hiaraka ianao.
Ny fisarahana fotoana kely dia afaka manome anao tena mazava, ary hahatonga anao hahatsapa izay tena ataonao lohalaharana sy tadiavinao amin'ny fiainana.
Raha mipoitra io toe-javatra io dia mety hahatsapa ho meloka ianao fa tsy liana ianao. Tadidio fa mila mametraka ny tenanao ho lohalaharana ianao ary manao ny marina - manamafy indray fa tapitra eo anelanelanao io ary aleonao tsy mihaino azy ireo intsony.
Aza tapitra voafandrika ao anaty fifandraisana tsy salama fotsiny satria tsy te handratra ny fihetsem-pon'izy ireo ianao!
Wow, nandrakotra be dia be izahay tao ary manantena izahay fa hitanao fa mahasoa azy! Na mampiasa ny lalàna tsy misy fifandraisana ianao mba hihoarana ny ex iray, na hahazoana ex ex, dia misy torohevitra tsara azonao harahina.
Aza adino ny mijery ny tenanao aloha - ny fifandraisana dia fanampiny fa tsy tena ilaina.
Mbola manana fanontaniana momba ny lalàna tsy misy fifandraisana na mila fanampiana mifikitra amin'izany? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Fomba 15 hahafantarana raha mbola tia anao ny anao taloha
Tokony hosakananao ve ny taloha? Tombontsoa 5 sy 4 maharatsy ny fanakanana azy ireo
Antony 12 no mahatonga ny lehilahy hiverina herinandro na volana maro taty aoriana
ho faly indray ve aho
tsy manana tanjona amin'ny fiainako aho
nahoana aho no matahotra ny tsy hahomby?
ahoana no nahatonga an'i mrbeast nanan-karena be